ဘယ်သူတွေက တာလီဘန်လဲ? – ဆောင်းပါး… – PVTV Myanmar
ဘယ်သူတွေက တာလီဘန်လဲ? – ဆောင်းပါး
Like – 9K Share – 2466
2021-05-23 at 8:11 PM
2021-05-24 at 8:22 PM
ရဲဖွတ်လေ သူ့ကိုယ်သူ ပညာတတ်လိုလိုနဲ့ ဘိဓက အိုးခြမ်းပဲ့… Debate တွေထဲပါလိုက် အကြံပေးသလို လုပ်လိုက် ဝေဖန်ပြလိုက်နဲ့ ချီးဘရိမ်းတွေပဲ ဝါဒမှိုင်း တိုက်လို့ရမယ်။ အတွေးအခေါ်တတ်တဲ့ ပြည်သူက အဲ့လူကိုပညာတတ် စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းစားမှန်းသိတယ် …
ပျူ​စောထီး ​တွေ က ဗုံးခွဲပြီး ပြည်သူလူထုကိုလိုက်ဖမ်း ပစ်ဒဏ်ချ​နေတာ
Myat Noe Pwint Phyu says:
2021-05-25 at 7:11 PM
သတီး စတား says:
2021-05-26 at 12:19 AM
2021-05-27 at 7:16 AM
2021-05-27 at 9:24 AM
အစကတည်းက အာဏာမသိမ်းနဲ့ဆိုတော့ အစကတည်း သူတို့ကို သွားမစနဲ့လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ
သွားလေ။ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကျ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်
တော့ ဟိုက ပြန်ကိုက်တာ ခံရပီ
မလား။ New watch
ဆို ဖတ်ရတာ တဖြည်းဖြည်းရွံ
လာတယ်။ သူများပဲ အပုတ်ချ
နေတာ။ မကောင်းတဲ့ အရာက
သူတစ်ပါးကို အပုတ်ချ လှောင်ပြောင်တာကတော့
ဒီလူတွေ မကောင်းမှန်း ပြည်သူတိုင်းသိပီးသား။ ရိုးရိုးသွားလည်း NLDပဲနိုင်မှာ အားလုံးအသိ။ လောဘကြီးပီး မဲကို အမှတ်ပြည့်လိုချင်နေတာ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်လေ။
အခုလည်း အာဏာက သိမ်းပီး
နေပီ။ နိုင်ငံ့ကောင်းစားဖို့ တစ်
တစ်ဖက်က ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ပြည်
ကြိုးစားယူရမှာပေါ့။ ခုက ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ပါတီဆွဲနဲ့ နှစ်ဖက်လုံး
အဓမ္မကို အဓမ္မနဲ့ တိုက်လို့
( ဘယ်ဘက်က မှန်ပါတယ်လို့
ေမာင့္ ခ်စ္သူ says:
2021-05-28 at 2:09 PM
2021-05-31 at 12:44 PM
2021-06-02 at 10:44 PM
သံပုံး – သီချင်း…